Tim Cook wuxuu daabacay warqad furan oo ku socota bulshada Apple ee Yurub | Waxaan ka socdaa mac
Ka dib dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo ganaaxa wajahay shirkadda Cupertino waxqabadkeeda Yurub, Apple ayaa ku daabacday warqad furan degelkeeda ku socota bulshada ku nool Yurub, macaamiisha wax soo saarka sumadda.
Sidaa darteed warqaddu waxay soo xiganeysaa:
36 sano ka hor, muddo dheer ka hor inta aan la sii deyn iPhone, iPod, ama xitaa Mac, Steve Jobs wuxuu aasaasay howlihii Apple ee ugu horreeyay Yurub. Waqtigaas ka dib shirkaddu horeba way u ogayd in si ay ugu adeegto macaamiisheeda reer Yurub ay saldhig ugu baahan tahay halkaas. Sidaa darteed, Oktoobar 1980, Apple wuxuu ka furay warshad Cork (Ireland) 60 shaqaale ah.
Sannadahaas Cork waxaa soo foodsaartay shaqo la'aan sare iyo mug aad u hooseeya oo maalgashi dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, maamulka Apple waxay arkeen meel hodan ku ah karti, awood u leh inay la koraan shirkadda haddii ay gaaraan guushii ay rajeyneysay.
Tan iyo markaas waxaan sii wadnay shaqada aan joogsiga lahayn ee Corkxitaa waqtiyada hubaal la'aanta shirkadeena, maantana waxaan shaqaaleysiinaa ku dhowaad 6.000 oo qof guud ahaan Ireland. Inta badan intooda badani wali waxay joogaan Cork, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqaalaheenna ugu horreeya, iyagoo fulinaya shaqooyinka ugu kala duwan ee qayb ka ah mashruuca caalamiga ah ee Apple. Shirkado caalami ah oo aan tiradooda la tirin karin ayaa raacay tusaalaheena iyagoo maalgashi ku sameeyay Cork, oo maanta ku raaxeysata dhaqaale maxalli ah oo aad uga horumarsan sidii hore.
Guusha sii hurisay kobaca Apple ee Cork waxay ka timid alaabooyin casri ah oo farxad geliya macaamiisheenna. Guushani waxay naga caawisay abuurista iyo joogtaynta in ka badan XNUMX milyan oo shaqo oo ku baahsan Yurub.- Shaqaalaha Apple, boqolaal kun oo horumariyayaal app ah oo sida ugu fiican ugu shaqeynaya App Store, iyo shaqooyin kale oo ka dhexjira soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Ganacsiyo yar yar iyo kuwa dhex dhexaad ah oo aan la tirin karin waxay ku tiirsan yihiin Apple, waana ku faraxsanahay inay annaga nagu kalsoonaan karaan.
Muwaadiniin ahaan iyo xubno ganacsade mas'uul ah, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay waxtarka aan u leenahay dhaqaalaha maxalliga ah ee Yurub iyo bulshooyinka adduunka. Kobacayagu sannadihii la soo dhaafay ayaa naga dhigay cashuur bixiyaha ugu weyn Ireland, waa canshuuraha ugu weyn Mareykanka iyo canshuur bixiyaha ugu weyn adduunka.
Inta lagu jiro waqtigan oo dhan waxaan talo ka helnay maamulka canshuuraha ee Irish si aan si sax ah ugu hogaansano qawaaniintooda canshuuraha, isla nooca talobixinta ay helaan shirkad kasta oo joogitaan ka leh dalka. Apple waxay waafajineysaa sharciga waxaanan bixineynaa dhammaan canshuuraha nalagu leeyahay, Ireland iyo waddan kasta oo aan ka hawlgalno.
Komishanka Yurub waxay bilaabeen olole ay dib ugu qorayaan taariikhda Apple ee Yurub, iska indha tirka sharciyada canshuuraha ee Ireland iyo in howsha ay si xagjir ah u badasho nidaamka canshuuraha caalamiga. Ra'yiga la soo saaray Ogosto 30 wuxuu ku andacoonayaa in Ireland ay siisay shirkadda Apple canshuur gaar ah. Sheegashadani kuma salaysna xaqiiqo iyo sharci midna. Marnaba ma weydiisaneyno mana helno nooc daaweyn gaar ah. Waxaan hadda isku helnay xaalad gaar ah oo nalooga baahan yahay inaan dib ugu noqonno canshuur dheeri ah oo aan siino dowlad sheeganeysa inaan lagu lahayn wax ka badan wixii aan horay u bixinay.
Aragtida Guddigu waa mid aan hore loo arag oo saamaynteeda ayaa ah mid culus oo ballaadhan. Waxa uu dhab ahaan soo jeedinayo waa in lagu beddelo sharciyada canshuuraha ee Irish nooc kale, oo ay Guddigu u maleynayaan inay ahayd. Tani waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa madaxbanaanida Dowladaha Xubnaha ka ah Midowga Yurub marka loo eego arrimahooda maaliyadeed iyo mabda'a hubaasha xukunka sharciga ah ee Yurub. Ireland waxay ku dhawaaqday inay damacsan tahay inay racfaan ka qaadato go aanka Komishanka sidoo kale Apple ayaa samayn doonta sidaas oo kale. Waxaan ku kalsoonahay in amarka Guddiga uu gabanayo.
Asal ahaan, kiiska ay soo bandhigeen Komishanku maaha mid aad u badan oo ku saabsan inta lacag ee Apple ay bixiso cashuurta, laakiin waa ku saabsan dowlada ay aruuriso lacagtaas.
Canshuuraha shirkadaha caalamiga ah waa arin cakiran, laakiin waxaa jira mabda 'guud oo la oggol yahay: faa'iidooyinka shirkad waa in lagu canshuuraa waddanka ay ka abuurayaan qiimahooda. Apple, Ireland iyo Mareykanka ayaa isku raacay qodobkaan.
Xaalada Apple, cilmi baaristeena iyo horumarinteena inteeda badan waxay ka dhacdaa Kaliforniya, marka faa iidooyinka ugu badan ee laga helo waxaa lagu canshuuraa Mareykanka. Shirkadaha yurubiyanka ah ee ka ganacsada dalka Mareykanka waxay bixiyaan canshuurta iyadoo loo eegayo isla shuruudaha. Si kastaba ha noqotee, hadda Guddigu wuxuu rabaa inuu beddelo xeerarka si dib-u-fal ah.
Go'aanka ayaa si cad diirada loogu saaray AppleLaakiin saameynteeda ugu qotada dheer ee dhaawaca leh waxaa laga dareemi doonaa maalgashiga iyo shaqo abuurka Yurub. Haddii aragtida Guddiga la dhaqan geliyo, dhammaan shirkadaha Ireland iyo Yurub inteeda kale waxay halis ugu jiraan in lagu canshuuro sharciyo aan weligood jirin.
Apple waxay muddo dheer taageereysay dib-u-habeynta canshuuraha iyadoo leh labo ujeedo: fudeyd iyo caddeyn. Waxaan aaminsanahay in isbedeladan ay ka soo baxaan hannaan sharci dejin ku habboon, in lagu xisaabtamo soo jeedinteeda codka madaxda iyo muwaadiniinta dalalka ay dhibaatadu saameysey. Iyo sida sharci kasta oo kale, qawaaniinta cusub waa inay ku dhaqmaan wixii hadda ka dambeeya, oo aan dib-u-falcelin loogu sameyn.
Waxaan u heellan nahay Ireland waana ujeedkeenna inaan ku sii wadno maal-gashiga halkaas, koritaanka iyo u adeegidda macaamiisheenna si isku mid ah oo xamaasad iyo dadaalba leh weligood. Waxaan si adag u aaminsanahay in xaqiiqooyinka iyo mabaadi'da sharciga ee lagu aasaasay Midowga Yurub ay ka adkaan doonaan.
Dagaalku wuu bilaabmay. Waan arki doonaa sida arrintaan oo dhami u dhammaato. Halkan waxaan ka imid Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tim Cook wuxuu daabacaa warqad furan oo ku socota bulshada Apple ee Yurub
Waxa Midowga Yurub damacsan yahay inuu sameeyo waa in la mideeyo sharciga canshuuraha ee qaaradda oo dhan, taas oo aan wax xun ahayn, in kasta oo aan loo waayi doonin dadka dhaha, iyo sabab wanaagsan, in ku wareegga dalalka kale lagu qasbo inay ilaaliyaan sharciyada iyo saameyntooda ayaa ah nooc ka mid ah faragelin iyo saameyn ku yeelashada madax-bannaanida, hase yeeshe wax ay dalalka Yurub ugu midoobeen xagga lacagtooda, in kasta oo ay taasi muujisay inay ka faa'iideysatay qaarna ay ku tumatay kuwa kale sida xaaladdii Griiga oo adduunka oo dhan ay saameysay. Dhibaatadu ma ahan in sharciga canshuuraha uu ka mideysan yahay Yurub oo dhan, dhibaatadu waxay tahay haddii hore, TUSAALO 10 doolar sanadkii ayaa lagu bixin jiray canshuuraha hadana 11 waa in la bixiyaa, dhib malahan, dhibaatadu waxay tahay Midowga Yurub. waxay dooneysaa in shirkadaha ay kumanaan doolar ka bixiyaan canshuuraha gadaal maxaa yeelay sida ay iyagu sheegaan in dollar dheeri ah lagu leeyahay iyaga tobaneeyo sano hahahahahahahahaah waa doqonimo sax ah sida Apple oo kale, waxay go aansan karaan inay kala diraan shirkadahooda oo ay wax walba u qaadaan USA ama wadan kale, iyagoo ka tagaya Yurub sida eyga oo leh 2 keeg iyo ka xun. Nasiib wanaag, shirkadaha ay saameysey way badan yihiin waxayna awoodi doonaan inay gacan ka gashaan doofaarka midowga yurub isla markaana ay ku qasbaan inaysan isku dayin inay sharciga cashuurta dib u noqdaan. maxaa yeelay waad waayi kartaa wax badana waa ka badan tahay canshuurta.
HacBook Elite, Hackintosh shaqeynaya oo laga iibinayo $ 329